Somaliland oo faah faahin dheeraad ah ka bixisay xariga Boqor Buur-Madoow - jornalizem
Somaliland oo faah faahin dheeraad ah ka bixisay xariga Boqor Buur-Madoow
​Maamulka Somaliland ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay xariga Boqor Cismaan Buur-Madoow oo ay xabsiga u taxaabeen ciidamada habeennimadii xalay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Somaliland Faysal Xiis Cilmi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay isaga oo aan heysan amar inuu aaday Puntland, halkaasina uu kaga dhawaaqay ereyo ka soo horjeedo Somaliland, iyaga oo intaa ku daray in uu loo gudbin doono xeer ilaalinta.
“Ciidanka Booliska waxay soo xireen Boqor Buur-madow, oo lagu eedeynayo inuu galay dambi qaran dumis ah, isaga oo Puntland kaga dhawaaqay arrin qaran dumis ah, ciidanka xarigiisa waxay u mareen sifio sharci ah, cid u fasaxday iyo cid u ogolaatay midna ma jirto inuu aado Puntland” ayuu yiri Faysal Xiis.
Boqor Cismaan Boqor Buur-madow oo Somaliland ay xirtay ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degaanada Puntland, halkaasi oo uu uga qeyb galayay Xaflad ku saabsaneyd isir dhaqan.
Maalmihii ugu danbeeyayba waxaa sii kordhayay xariga Somaliland loogu geysanayo dadka waxgalka ah sida Abwaanada, Wariyeyaasha, Salaadiinta iyo Fanaaniinta, kuwaasi oo xabsiga loo dhigayo in ay qoraalo ku soo qoreen barahooda Internetka ama ay tageen deegaanno ka baxsan maamulka.
Todobaadkan ayeey aheyd markii maxkamada gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa xabsi dhan Saddex Sano ku xukuntay Abwaannad Naciimo Qorane oo ku eedeysan in qortay erayo Lid ku ah jirintaanka Somaliland.